प्रदेश २ को ८ औं प्रदेशसभा मंसिर २९ का लागि आह्वान, प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ला त ? - Sawal Nepal
प्रदेश २ को ८ औं प्रदेशसभा मंसिर २९ का लागि आह्वान, प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ला त ?
जनकपुरधाम सवाल नेपाल २०७८ मंसिर ८, २२:०६
जनकपुरधाम । प्रदेश २ सभाको ८ औं अधिवेशन आगामी मंसिर २९ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ ।
प्रदेश २ सभा सचिवालयले आगामी २९ मंसिरमा प्रदेश सभाको ८ औं अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।
सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सातौँ अधिवेशनमा प्रदेश सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो । तर, पनि अहिलेसम्म दलहरू यो विषयमा सहमत हुन सकेको छैन ।
सरकारमा सहभागी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ दलबीच अहिलेसम्म छलफल नभएको बताउनुभयो । प्रदेशको राजधानीको विषयमा दलहरूबीच सहमति भए पनि नामकरणको सवालमा जसपा र कांग्रेसको प्रस्ताव सुरुदेखि नै फरक रहँदै आएको छ ।
प्रदेशको नामकरणलगायतका एजेण्डामा कुनै सहमति वा सम्झौता नभएको मन्त्री यादवले बताउनुभएको छ । मधेस प्रदेशको पक्षमा कांग्रेस पार्टी नरहेको उहाँले बताउनुभयो । मिथिला–भोजपुरा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान यथावत् छ । तर, सहमतिका लागि मध्य बिन्दु खोज्न काँग्रेस तयार रहेको बताइएको छ ।
नेकपा एमाले प्रदेश सभामा कमजोर रहे पनि शुरुबाटै मधेस प्रदेशको पक्षमा देखिएको छैन । हालै सरकारमा सहभागी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मधेस प्रदेशमा सहमति जनाउने सम्भावना बलियो छैन ।
अहिलेको सरकारलाई दुई तिहाइ भन्दा पनि बढी बहुमत भएकोले यसपटकको प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकिने नेताहरु बताउछन् ।